China Amandla eSolar Power Kit MLW 100W Ukwenziwa kunye neFektri | Mutian
Cima inverter yelanga
Isixhobo saMandla eSolar esiphathwayo
Inkqubo yeNkqubo yaMandla eSola
Umlawuli weNtlawulo yeSola
Izibane zamandla elanga
Inverter yamandla elanga
Isixhobo samandla elanga
Izixhobo zamandla eSolar Power MLW 100W
Ukucaciswa Model ID MLWB-100 MLWB-200 MLWB-300 ...
Isixhobo soMbane seSola soMbane seMLW 10W
Ukucaciswa Solar iPhaneli Peak Power 10W Solar Pa ...
Umlawuli weSolar Charge MPPT MC W Series
Ukucaciswa Model (MPPT MC-W-) 20A 30A 40A 50A ...
Cima i-Grid Solar Inverter MLWS Series
Ukucaciswa Model MLW-S 10KW 15KW 20KW 30KW 40K ...
Cima i-Grid Solar Inverter MLWD Series
Ukucaciswa IMODEL-MLW-D 3KW 4KW 5KW 6KW 8KW 10K ...
Cima i-Grid Solar Inverter MLWB Series
Ukucaciswa IMODEL-MLW-B 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW ...
Cima i-Grid Solar Inverter MLWL Series
Ukucaciswa IMODEL-MLL 0.5KW 1KW 2KW 3KW Syste ...
Ixabiso le-EXW: I-US $ 5-50 / isiqwenga
Min.Order Ubungakanani: 1 Piece / Pieces
Immimiselo yokuhlawula: T / T, L / C, PayPal, UMANYANO WENTSHONA, ALIBABA
Imodeli yesazisi MLWB-100 MLWB-200 MLWB-300W MLWB-500W
Ikaliwe Amandla 100W 200W 300W 500W
Iphaneli yeSola 100Wp × 1pc 100Wp × 2pcs 150Wp × 2pcs 200Wp × 2pcs
Ibhetri 12AH / 12V 24AH / 12V 40AH / 12V 60AH / 12V
Inverter ye-AC 100W 200W 300W 500W
Imveliso yamandla I-USB 5VDC + 12VDC + AC110V / 220V ± 5% 50Hz / 60Hz ± 1%
Ibhalbhu ye-LED Iifayile ezimbini Iifayile ezimbini Ukhetho Ukhetho
Umlandeli 1pcs 1pcs 1pcs 1pcs
Siya kubambelela kumxhasi we-1, umgangatho ophezulu we-1, ukuphuculwa okuqhubekayo, ukuxhamla kunye nemigaqo yokuphumelela. Xa intsebenziswano kunye nomthengi, sibonelela abathengi ngeyona nkonzo iphakamileyo ekumgangatho ophezulu.
Ukunyaniseka kubo bonke abathengi siyacelwa! Ukukhonza kudidi lokuqala, olona mgangatho uphezulu, elona xabiso kunye nomhla wokuhanjiswa okukhawulezayo lilungelo lethu! Nika bonke abathengi ukukhonza okuhle yimfundiso yethu! Oku kwenza ukuba inkampani yethu ifumane inkxaso kubathengi kunye nenkxaso! Wamkelekile kwihlabathi liphela abathengi basithumelele imibuzo kwaye sijonge phambili ekusebenzisaneni kwakho okuhle! Nceda ubuze malunga neenkcukacha ezithe vetshe okanye ucele ukuthengiswa kwiindawo ezikhethiweyo.
Iqela lethu lobunjineli lobuchwephesha liya kuhlala lilungele ukukusebenzela ukubonisana kunye nengxelo. Siyakwazi ukunikezela ngeesampuli zasimahla ngokupheleleyo ukuhlangabezana neemfuno zakho. Imizamo egqwesileyo iya kuveliswa ukukunikezela ngenkonzo efanelekileyo kunye neempahla. Nabani na ocinga malunga nenkampani yethu kunye nentengiso, qiniseka ukunxibelelana nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye unxibelelane nathi ngokukhawuleza. Njengendlela yokwazi ukuthengisa kwethu kunye nokuqina. okuninzi, unokuza kumzi-mveliso wethu ukuze ufumanise. Siya kuhlala samkela iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela kwishishini lethu ukwakha ubudlelwane beenkampani nathi. Qiniseka ukuba uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngeshishini kwaye siyakholelwa ukuba besizimisele ukwabelana ngamava aphezulu okurhweba kunye nabo bonke abathengisi bethu.
Egqithileyo Isixhobo soMbane seSola soMbane seMLW 10W
Okulandelayo: Inkqubo yeNkqubo yeLanga yeSolar ekhaya
Isistim yaMandla eSolar yeKhaya ye-2000w
Gqibezela izixhobo zamandla elanga zamakhaya
Isixhobo soMbane weSolar Power Portable
Indawo yokuHlalisa iSolar Power Kit
Amandla eSolar 220 Volt Kit Solar
Amandla ombane weSolar Power
Ikhithi yamandla elanga
Izixhobo zombane zelanga
Izixhobo zeSola zaMandla elanga
Inkqubo yeSolar Power Kit
UMutian Solar Energy Scientech Co., Ltd.